यौनजीवन र दम्पतीबीचको समझदारी « News of Nepal
यौनजीवन र दम्पतीबीचको समझदारी
– डा. राजेन्द्र भद्रा
म ३५ वर्षीय महिला हुँ । मेरो १२ वर्षकी छोरी र ९ वर्षको छोरा छन् । मेरो श्रीमान् ४ वर्षपहिले खाडी मुलुक जानुभएको थियो । यस अवधिमा मैले कृषि व्यवसाय शुरु गरेँ । व्यवसाय राम्रै चलिरहेको छ । महामारी शुरु हुनासाथ श्रीमान् फर्कनुभयो र मैले शुरु गरेकै व्यवसायलाई मिलेर चलाउने सल्लाह भयो । लामो समयपछि साथै बस्न पाएकोमा रमाइलो पनि भयो । तर पछि सम्बन्ध चिसिन थाल्यो । मैले उत्पादन र उहाँले बाहिर बिक्री हेर्ने सोच भए पनि पहिलेदेखि मैले नै व्यवसाय चलाएको हुनाले मानिसहरूले मलाई नै फोन गर्छन् । तर उहाँलाई यो मन परेन, खुशी देखिनुहुन्न । यसरी असमझदारी बढेमा परिवार नै टुक्रिने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । केही सल्लाह पाउँछु कि ?
– शान्ति, पाल्पा
आत्मीयता तथा सम्बन्धहरु
मानव यौनिकताको कुरा गर्दा कतिपयले यो यौनसम्पर्कको कुरा मात्र हो भन्ने ठान्छन् । यो एक जटिल कुरा त हो नै । यसको क्षेत्र फराकिलो पनि छ । यसलाई सजिलोरुपमा बुझ्न यसका पाँच घेराहरूले सजिलो बनाउँछन् । जस्तो– ऐन्द्रिकता, आत्मीयता, यौन पहिचान, यौन स्वास्थ्य तथा प्रजनन र यौनिकीकरण ।
ऐन्द्रिकतामा इन्द्रियहरुबाट प्राप्त सुखको बारेमा चर्चा गरिन्छ । त्यसै गरी यौन पहिचानमा जैविक, लैंगिक पहिचान वा भूमिका अनि यौन परिचयको बारेमा चर्चा गरिन्छ । अनि यौन स्वास्थ्य तथा प्रजननको घेराले सन्तान जन्माउने, उनीहरूको लालनपालनदेखि विभिन्न यौनरोग (संक्रमण) का बारेमा चर्चा गरिन्छ । यौनिकीकरणमा यौन तथा यौनिकतालाई अन्य कसैलाई प्रभाव पार्न, नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ । यी मध्ये शारीरिक पक्षको नजिकपन ऐन्द्रिकताले दिने भए पनि भावनात्मक नजिकपन भने आत्मीयताले दिन्छ । दुई व्यक्ति सम्बन्धको विकासमा आत्मीयताले गहिरो भूमिका खेल्छ । सामान्य सम्बन्धबाट यौनसम्बन्धजस्तो अन्तरङ्ग सम्बन्धको लागि आत्मीयता र समझदारी चाहिन्छ ।
आत्मीयता अर्को व्यक्तिसँगको संवेगात्मक समीपता तथा जोडिएको स्थिति हुने एक विशेष भावनात्मक अनुभूति हो । आत्मीय सम्बन्ध जहिले पनि एक–आपसी विश्वास, हेरचाह वा वास्ता गर्ने अनि एक–अर्काको स्वीकार्यता नै मुख्य हो । आत्मीय सम्बन्धमा भएका व्यक्तिहरू अन्य व्यक्तिभन्दा बढी स्वस्थ, खुशी र सन्तुष्ट महसुस गर्ने गर्दछन् ।
हामी तुलनात्मकरुपमा बढी व्यक्तिवादी हँदै गएका र आफ्नो फाइदाको बारेमा बढी सोच्ने भएका छौं । यसको प्रभाव हाम्रो वैवाहिक जीवनमा पनि परेको नै छ ।
यौनजीवनको चासो र चिन्ता
हाम्रो जीवनमा यौनसम्बन्धी अनेक चासो र चिन्ता हुने गर्दछ । अन्य कतिपयय घरायसी मामिलामा राम्ररी नै सरसल्लाह गरेर समस्याको समाधान गर्ने दम्पतीमा पनि यौनसम्बन्धी मामिलामा सहजरुपमा समाधान गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । विवाह अवधिअनुसार दम्पती वा यौनजोडीमा आफ्नै चासो र चिन्ता प्रकट हुनसक्छ । कतिपयमा गर्भ रहने चिन्ता वा कहिले गर्भको लागि तयार हुने बारेका चासो हुनसक्छ । यसमा समझदारी नभएमा यौन क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर गर्दछ । सन्तान जन्माउने मामिलामा दुवैको गहिरो समझदारी चाहिन्छ । कतिपयलाई यौनरोगको सन्दर्भमा चासो र चिन्ता हुने गर्दछ । यसले दम्पतीभन्दा बाहिरको सम्बन्धलाई पनि संकेत गर्दछ ।
त्यसै गरी कतिपयमा लिङ्गको नाप, स्तनको आकार, कति मोटो वा मोटी वा दुब्लो वा दुब्ली छु वा सुन्दर देखिन्न कि भन्ने चिन्ताले सताउने गर्दछ । जस्तोसुकै स्थितिमा पनि मेरो जोडीले मलाई स्वीकार्छ भन्ने समझदारी आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी शीघ्र स्खलन, यौन सक्षमता, यौन सुख दिन नसकिएला, पीडायुक्त होला कि भन्ने जस्ता चिन्ताको कारणले समझदारीमा कमी आएमा त्यसले यौनजीवनमा नै नराम्रो असर पार्दछ । आफ्नो यौनजोडीको शारीरिक स्वरुप जस्तो छ त्यसै अनुरुप स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसै गरी कुनै पनि कार्य गर्दा कतिपय स्थितिमा तल–माथि पर्न सक्छ । फेरि अर्कोपल्ट राम्ररी कोशिश गरौंला भनेर यौनजोडीमा सहज स्थिति बनाउन सकिए समझदारी बढ्छ । यौनसम्पर्क गर्दाको चरमसुख पनि आलोपालो गरी लिन–दिन एक–अर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ ।
असमझदारी हुने अर्को एक महत्वपूर्ण कारण विवाह इतर सम्बन्धको शंका हो । केही स्थितिमा यो यथार्थ पनि हुनसक्छ । दम्पती वा यौनजोडीबाहेक अर्को कसैप्रति लगाव छ कि वा सम्बन्ध छ कि भन्ने किसिमको शंका–उपशंकाले असमझदारीको बीजारोपण गर्दछ । हाम्रा वरिपरिका कतिपय व्यक्तिहरूले यसलाई मलजल गर्दछन्, जसले थप आगोमा घिउ थप्ने काम हुन्छ । व्यक्तिगतरुपमा पनि यो मनमा एकपटक पसेपछि निकाल्न निकै गाह्रो हुन्छ । यहाँ एक विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने, जसरी तपाईंको ध्यान आफ्नो यौनजोडी वा श्रीमान् वा श्रीमतीबाहेक अरुमा जाँदैन भने पक्कै नै उसको पनि यस्तो स्थिति होला भनेर विश्वास गर्न सक्नुपर्दछ । यस्तो बेलामा आफ्नो जोडीको चियोचर्चामा समय र स्रोत खर्च गर्नुभन्दा स्पष्टसँग कुरा गर्ने गर्नुपर्दछ ।
बीसौं–पच्चीसौं वर्षसम्म फरक परिवेशमा हुर्केका व्यक्तिको जीवनमा अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि पक्कै नै घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुनसक्छ । त्यस्ता व्यक्तिमध्ये केही विपरीत लिङ्गी पनि हुन सक्छन् । व्यवसायको सन्दर्भमा पनि धेरै नै परिचित–अपरिचित व्यक्तिहरूसँग स्वाभाविकरुपमा नै कुराकानी हुने गर्दछ । यस्ता कुरालाई लिएर यहाँ अनावश्यकरुपमा प्रणय सम्बन्ध थियो भन्ने कुरामा शंका गर्नु जायज हुँदैन । कसैसँग त्यति घनिष्टता थियो भने तपाईंसँग किन प्रणय सम्बन्ध वा विवाह हुन्थ्यो होला र ? वा आफ्नो घरपरिवारको उन्नतिको लागि मरिमेट्ने गरिन्थ्यो त ? यहाँ यस्ता साथीभाइ वा व्यवसामा संलग्न व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुभएन भने झन् परतिर भाग्ने र सामान्य भेटघाटलाई पनि लुकाउनुपर्ने स्थिति आउँछ, जसले समझदारी र अनि सम्बन्धलाई झनै बिगार्छ ।
राम्रो आत्मीय सम्बन्ध र समझदारीको लागि खुला कुराकानी, एक–अर्कालाई शारीरिकका साथै मानसिक सहयोग, प्रेममय सम्बन्ध आवश्यक कुरा हुन् ।
समझदारी किन ?
जसै–जसै हामी अहिले तथाकथित आधुनिक समाजतिर अग्रसर छौं, हामी कतिपय सामाजिक तथा नैतिक मूल्यमान्यताको अवलम्बनमा कमजोर हुँदै गएका छौं । हामी तुलनात्मकरुपमा बढी व्यक्तिवादी हुँदै गएका र आफ्नो फाइदाको बारेमा बढी सोच्ने भएका छौं । यसको प्रभाव हाम्रो वैवाहिक जीवनमा पनि परेको नै छ । आत्मीयता र समझदारीको कमीको स्थितिमा दम्पती वा श्रीमान्–श्रीमती नभएर दुई व्यक्ति एकसाथ आफ्ना केही भौतिक आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि साथ बसेको जस्तो मात्र छ । आत्मीय सम्बन्ध अनि समझदारीको विकास त्यसमा कसरी आनन्द लिने भन्ने सिक्न बिर्सिएका छौं । श्रीमान्–श्रीमती वा यौनजोडी वास्तवमा एक–अर्काका पूरक हौं भन्ने कुरा पनि याद गर्दैनौं । भनिन्छ, कतिपय स्थितिमा यो सुखी यौनजीवनको लागि प्रणय सम्बन्ध भन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले देखेका छौं कि कतिपय स्थितिमा सानो असमझदारीले छुट्टिएर बसेका जोडीले एक हदसम्म माया गर्ने भए पनि साथै बस्ने स्थिति हुँदैन । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने समझदारी र प्रणय सम्बन्ध पनि एक सिक्काको दुई पाटा वा पूरक नै हुन् ।
समझदारीको अर्थ हामीले माया गर्ने यौनजोडीको सन्दर्भमा सचेत, संवेदनशील र सहज हुनु हो । यहाँ कुनै व्यक्तिको बारेमा पर्याप्त जानकारी हुनु पर्याप्त छैन । यसको लागि व्यक्तिको भावनात्मक प्रज्ञानता चाहिन्छ । आत्मीय सम्बन्ध यौनजोडी वा दम्पतीको बीचको समझदारीको लागि आधार नै हो, जुन स्वस्थ यौनजीवनको लागि आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति सर्वगुणसम्पन्न हुँदैन, केही न केही कमी–कमजोरी सबैजसो व्यक्तिमा हुन्छ नै । दुवैले एक–अर्कामा भएका यस्ता कमी–कमजोरीलाई कोट्याउँदै मन दुखाउनुभन्दा जे–जस्तो स्थिति छ त्यसैलाई स्वीकार्नु श्रेयष्कर हुन्छ । घरायसी वा कामको बोझले अहिले एक–अर्कालाई पर्याप्त समय दिन नसकिने स्थिति पाइन्छ । दुवैजनाले समय–समयमा एक–आपसमा पर्याप्तरुपमा रमाइलो वातावरणमा एकान्तवास गर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्दछ । सम्बन्ध प्रणययुक्त हुनु त प¥यो नै, यसले एक–आपसमा विश्वास बढाउन र एक–अर्काप्रति समर्पित भएर जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्दछ । राम्रो आत्मीय सम्बन्ध र समझदारीको लागि खुला कुराकानी, एक–अर्कालाई शारीरिकका साथै मानसिक सहयोग, प्रेममय सम्बन्ध आवश्यक कुरा हुन् ।
समझदारीको लागि आपसी सञ्चार
दुई व्यक्तिको बीचमा समझदारी हुन वा समझदारीको विकास हुन अन्तरव्यक्ति सञ्चार अत्यावश्यक हुन्छ । भाषाको विकास भएपछि हामी अहिले धेरै हदसम्म बोलेर नै अर्थात् मौखिकरुपमा आफ्ना भावना वा चाहना व्यक्त गर्ने गर्दछौं । तर मानव विकासको क्रममा यौन भाषाको विकासभन्दा पहिले नै भएको हुनाले सञ्चारको अमौखिकरुपमा हाउभाउ, हेराइ, स्पर्श, आलिङ्गन, सुमसुम्याइजस्ता कुराले हाम्रो जीवनमा अझै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । त्यसैले यहाँ पनि ती सबै नै सञ्चारका तरिका अपनाइए आत्मीयता अनि एक–आपसी समझदारीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
यसको लागि आफ्नो यौनजोडीका कुरामा ध्यान दिने, दुईजनाले एकान्तवासमा पर्याप्त समय बिताउने, आफ्ना मनमा लागेका भावनाका साथै विचारहरू भन्ने, आफू तथा आफ्नो यौनजोडीले किन कुनै निश्चित किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ सोको बारेमा बुझ्न प्रयास गर्ने गर्नुपर्छ ।
यौनक्रियाकलाप एकदमै अन्तरङ्ग सम्बन्ध हो । आफ्ना अपेक्षाको बारेमा पनि आफ्नो यौनजोडीलाई भन्नुपर्दछ । यस्ता अपेक्षाहरू धरातलीय यथार्थमा आधारित हुनुपर्दछ । यदि यस्ता अपेक्षाहरू आफ्नो यौनजोडीले पूरा गर्न नसकेको छ भने पनि कोमल तरिकाले भन्नुपर्दछ । यस्तो बेलामा दोष दिनु वा थोपर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। प्रेम, आत्मीयता अनि समझदारी नै सुखमय यौनजीवनको आधार हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
बाँकेमा कोरोनाबाट एक महिलाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४४५ जनामा
दुर्गम भेगका नागरिकले घरआगनमा पहिलो पटक
कोरोना संक्रमितलाई आर्थिक सुरक्षा
के तपाई कपाल लामो बनाउन चाहानु
कांग्रेसको विरोध प्रचार गर्ने अटोमा आगजनी
नयाँ वर्षलाई मनसँग मन